Sina 12 Lohatambatra mitambatra Linear Weighher SW-LC12 Ho an'ny orinasa mpanamboatra hena sy mpanamboatra | Lanja mahay
Masinina fonosana mitsangana
Masinina fonosana Rotary
Detweigher Metal Detector
Masinina feno fonosana
12 Head Linear Combination weigher SW-LC12 Ho an'ny hena
Ampiharina amin'ny semi-auto na auto mandanja hena na be mangatsiaka, trondro, akoho, legioma sy ny voankazo maro isan-karazany, toy ny hena, ny laisoa, ny paoma sns.
Construction: Stainless vy 304
Fehikibo fehikibo: 10-1500 grama
Tombo'ny lanja: 10-6000 grama
Speed: 5-40 fonosana / min
Mitambatra ny tahan'ny
5-30 kitapo / min
220L * 120W mm
Ny haben'ny fehikibo
1350L * 165W mm
G / N lanja
250 / 300kg
araka ny marina
9.7 "efijery mikasika
220V / 50HZ na 60HZ; Dingana tokana
Izy io dia mihatra indrindra amin'ny hena semi-auto na auto milanja hena vaovao / mangatsiaka, trondro, akoho, legioma ary karazan-voankazo isan-karazany, toy ny hena voadidy, salady, paoma sns.
• Ny fandanjana ny fehikibo sy ny fandefasana azy ao anaty fonosana, fomba roa ihany mba tsy ho kely ny korontana amin'ny vokatra;
• mety indrindra ho an'ny sticky sy mora marefo amin'ny fehikibo misy fehikibo sy ny fanomezana,
• Ny fehin-kibo rehetra dia azo alaina tsy misy fitaovana, fanadiovana mora aorian'ny asa andavanandro;
• Ny refy rehetra dia azo atao ny manamboatra famolavolana araka ny endrik'ilay vokatra;
• Azo ampifandraisina amin'ny mpampita sakafo sy bagger automatique amin'ny lanjan'ny milanja sy ny fonosana;
• hafainganam-pandeha tsy manam-petra amin'ny fehikibo rehetra arakaraka ny endri-pamokarana samihafa;
• Auto ZERO amin'ny fehin-kibo mizana rehetra ho an'ny marina kokoa;
• Fehikibo miangona fehin-kibo mifono fatiantoka;
• Famolavolana hafanana manokana amin'ny boaty elektronika hisorohana ny tontolo iainana avo.
Smart Weigh dia manome fomba fijery 3D tsy manam-paharoa (ny fijery faha-4 toy ny etsy ambany). Azonao atao ny manamarina ny eo alohan'ny masinina, ny sisiny, ny tampony ary ny fijery rehetra amin'ny refy. Mazava ny fahafantarana ny habetsaky ny masinina ary manapa-kevitra ny fomba hametrahana ny mpanjaitra ao amin'ny orinasanao.
1. Inona ny rafitra fanaraha-maso modular?
Ny rafi-pitantanana modular dia midika hoe rafitra control. Ny motherboard dia manisa ny ati-doha, ny board de voyage dia mifehy ny milina miasa. Smart weigh multihead weigher dia mampiasa ny rafitra fanaraha-maso Modular faha-3. Ny fifehezana 1 mitondra fiara dia mifehy 1 famonosana fahana ary hopper 1 lanja. Raha misy 1 tapaka hopper, dia mandrara izany hipopotama fanakonana izany. Ireo hopper hafa dia afaka miasa toy ny mahazatra. Ary ny takelaka familiana dia mahazatra amin'ny mpandanja andian-dahatsoratra maro loha. Ohatra: tsia. Ny takelaka fiara 2 dia azo ampiasaina amin'ny tsia. Sambo fiara 5. Izy io dia mety amin'ny tahiry sy ny fikojakojana.
2. Moa ve ny lanjan'ity mavesatra ity dia lanjan'ny lanjan'ny tanjona 1?
Izy io dia afaka mandanja lanja samihafa, hanova fotsiny ny lanjan'ny lanja amin'ny rindrina hikasika. Fandidiana mora.
3. Miasa vy vita amin'ny vy ve ity milina rehetra ity?
Eny, ny fananganana masinina, ny endriny ary ny faritra ifandraisana amin'ny sakafo dia vy tsy misy fangarony na sakafo 304. Manana ny taratasy fanamarinana momba izany izahay, faly izahay mandefa anao raha ilaina izany.
Previous: 4 Head Linear Weigher SW-LW4
Manaraka: Kitapo kitapo gusset kitapo milina fonosana mitsangana
Address: Trano B, Kunxin Industrial Park, No. 55, Dong Fu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Provinsi Guangdong, Sina, 528425